Ubhekwe kwezisenyakatho umlilo wequbula | Isolezwe
Ubhekwe kwezisenyakatho umlilo wequbula
Isolezwe / 15 August 2012, 2:42pm /
SEKUKHISHWE isexwayiso ngomunye umlilo wequbula ongase uhlasele izindawo ezahlukene zasemakhaya enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal ngenxa yokudlanga kwesomiso nezivunguvungu zomoya owomile.
Ngokwezangoma zezulu, lo mlilo udalwa yisomiso esiba mandla kulezi zindawo.
Isangoma sezulu sakwaSouth African Weather Service, uMnuz Mdu Mthembu, sithe amazinga okushisa aphezulu azokhuphuka afinyelele ngaphezulu kuka-30% eNewcastle, Phongolo, Vryheid, Olundi, Richards Bay, eMpangeni naseMelmoth.
“Abantu abahlala kulezi zindawo kuzomele baqaphele uma bebasa umlilo ukuze bangazitholi sebeyisisulu somlilo wamadlelo. Izulu lomisile futhi kulindelwe ukuthi kube nomoya oshisayo ongenza ukuthi umlilo ungalawuleki uma uke wokheleka,” usho kanje.
Akukapheli zinsuku zingaki umlilo wequbula ushaye kwazwela emindenini engaphezu kuka-50 eNkwenkwe eMelmoth. Isimo sibe sibi kakhulu kule ndawo kanti kuze kwashona owesifazane osekhulile, kwacekeleka phansi impahla, imfuyo nengqalasizinda abantu basala bengenalutho. Abakhahla-mezekile bakhoseliswe enkulisa banxuswa nokuthi babhalise eminyangweni efanele ukuze bathole usizo ngokushesha.
AboMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zobuHoli boMdabu esifundazweni oholwa nguNgqongqoshe Nomusa Dube (osesithombeni) bahambe emazwini ezangoma zezulu bexwayisa umphakathi ngokuthi awuyeke ukushisa emaqeleni ngoba umlilo uyokheleka kugcine sekusha yonke indawo.
Okhulumela uMnyango uMnuz Vernon Mchunu uthe abantu abaqaphele uma bebasa umlilo izulu lomisile ngoba kuyingozi.
“Abayeke ukuba budedengu ngokushiya umlilo ubasiwe unganakiwe ngoba kungenzeka ukuthi ubhebhetheke kudaleke umonakalo omkhulu. Izindawo ezisenyakatho yesifundazwe zibhekene nale nkinga yesomiso nomlilo wequbula,” usho kanje.
Ukuguquguquka kwesimo sezulu okugcina sekudlule nemiphefumulo yabantu sekwenze uNgqongqoshe uDube wamemezela ukuthi kuzomele kwandiswe isabelo zimali soMnyango awuholayo.